ANALOGS EVERNOTE - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Analogs Evernote - ihe ịhọrọ?
Otutu puku nke akwukwo na akwukwo di na Intanet. Onye ọ bụla nwere ike ịgụ ha site na ihe nchọgharị ahụ, na-echeghị ha na kọmputa. Iji mee ka usoro a dị mfe ma dị jụụ, enwere mgbatị pụrụ iche nke na-emegharị peeji nke iji gụọ ọnọdụ.
Ekele ya, ibe weebụ yiri akwukwo akwụkwọ - a kpochapụrụ ihe niile na-enweghị isi, a gbanwere usoro nhazi ma wepụ ndabere ya. Foto na vidio ndị na-eso ihe odide ahụ ka dị. Onye ọrụ ahụ na-enweta ụfọdụ ntọala na-amụbawanye na ịgụ.
Otu esi eme ka ọnọdụ ịgụ na Yandex Browser
Ụzọ dị mfe iji gbanwee ibe weebụ ọ bụla n'ime ederede otu bụ iji wụnye mgbakwunye kwesịrị ekwesị. Na Ụlọ Ahịa Weebụ Google, ị nwere ike ịchọta ọkwa dịgasị iche iche maka nzube a.
Ụzọ nke abụọ, nke dị na ndị ọrụ nke Yandex. Nchọgharị na nso nso a - iji ejiji na ọnọdụ a na-ahụkarị.
Usoro 1: Wụnye ndọtị ahụ
Otu n'ime agbakwunyere kachasị mma maka ịsụgharị ibe weebụ iji gụọ ọnọdụ bụ Mercury Reader. Ọ nwere ọrụ dị mma, ma ọ bụ ezuru maka ọgụgụ dị mma n'oge dị iche iche nke ụbọchị na ndị nlekota dị iche iche.
Download Mercury Reader
Pịa bọtịnụ ahụ "Wụnye".
Na windo na-egosi, họrọ "Wụnye ndọtị".
Mgbe echichi nke ọma, bọtịnụ na ọkwa ga-apụta na pane ihe nchọgharị:
Gaa na ibe weebụ nke ịchọrọ imeghe na usoro akwụkwọ, ma pịa bọtịnụ ịgbasa n'ụdị roket.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi malite tinye ihe bụ site na ịpị ibe na ibe na ibe na bọtịnụ òké. Na nchịkọta nhọrọ na-emepe, họrọ "Mepee na Mercury Reader":
Tupu ịmalite iji ya, Mercury Reader ga-enye gị ịnakwere okwu nke nkwekọrịta ahụ ma kwenye na iji tinye ihe ahụ site na ịpị bọtịnụ ọbara ọbara:
Mgbe nkwenye gasịrị, saịtị nke ugbu a ga-aga n'ịgụ usoro.
Iji weghachite ihuenyo peeji nke mbụ, ị nwere ike ihichapu òké n'elu mgbidi nke mpempe akwụkwọ nke ederede ahụ, wee pịa ebe efu:
Pịa Esc na keyboard ma ọ bụ bọtịnụ gbasaa ga-agbanyekwa na ngosipụta ọkọlọtọ.
Ị nwere ike ịhazi njirimara nke ibe weebụ ndị a sụgharịrị gaa na ọnọdụ ịgụ. Pịa na bọtịnụ gia, nke ga-adị na nri aka nri nke ibe:
E nwere ntọala atọ dị:
Nhọrọ - obere (obere), ọkara (Ọkara), nnukwu (nnukwu);
Ụdị ụdị - na serifs (Serif) na enweghị serifs (Sans);
Isiokwu ahụ bụ ìhè (Ìhè) na ọchịchịrị (Ọchịchịrị).
Nzọụkwụ 2: Jiri usoro ịgụ ihe
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ọrụ nwere oke nke usoro ịgụ akwụkwọ, nke e mepụtara kpọmkwem maka Yandex. O nwekwara ntọala ndị bụ isi, nke na-ezikarị iji ederede ederede dị jụụ.
Akụkụ a adịghị mkpa ka a megharịa gị na ntọala ihe nchọgharị ahụ, ebe ọ na-arụ ọrụ site na ndabara. Ị nwere ike ịchọta bọtịnụ a na-agụ na ogwe ntụziaka:
Nke a bụ peeji nke a sụgharịrị gaa n'ọgụgụ agụ:
E nwere ntọala atọ na n'elu panel:
Ogo ederede. Kwadoro site na bọtịnụ + ma -. Ịdị elu kachasị elu - 4x;
Oju akwukwo. Enwere agba atọ dị: agba ntụ, odo, nwa;
Font. Onye akpọrọ aha 2 ederede: Georgia na Arial.
Ogwe ahụ na-apụ n'anya kpamkpam mgbe ị na-agagharị na ibe ahụ, ma gosipụta ọzọ mgbe ị na-ekpochapụ ebe ọ dị.
Ị nwere ike ịlaghachi saịtị mbụ ahụ site na iji bọtịnụ ahụ na adreesị mmanya, ma ọ bụ site na ịpị obe n'akụkụ aka nri:
Ọnọdụ ịgụ ihe bụ ohere dị mfe, na-ahapụ gị ka ị na-elekwasị anya n'ịgụ ihe ma ghara ịbụ ndị ihe ndị ọzọ dị na saịtị ahụ dọpụ uche gị. Ọ dịghị mkpa ịgụ akwụkwọ na ihe nchọgharị iji ha - ibe na usoro a anaghị egbu oge mgbe ị na-agagharị, a pụkwara ịhọrọ ederede echedoro nke ọma ma debe ya na mbadamba.
Ngwá ọrụ maka ọnọdụ ịgụ akwụkwọ, nke a rụrụ na Yandex Browser, nwere ntọala niile dị mkpa, nke na-enye ohere ka ị ghara ịgbanwere nhọrọ ndị ọzọ nke na-enye nlezianya nlele nke ọdịnaya ederede. Otú ọ dị, ọ bụrụ na arụ ọrụ ya adaghị gị, ị nwere ike iji nkwụnye ihe nchọgharị dị iche iche nke nwere nhọrọ dị iche iche nke nhọrọ.